ADY AMIN’NY TSY FISIAN-DRANO FARITRA ITAOSY : Nahazo fandrahonana ny mpitarika fitokonana
Efa am-bolana maro no nisedra olana goavana vokatry ny tsy fisian-drano ny eny amin’ny manodidina an’ Itaosy Faritra Atsimondrano iny. Nitroatra ny mponina satria tsy zaka intsony ny fahasahiranana. 5 décembre 2018
Mahatratra herinandro ny fahatapahana ary raha mandeha aza dia maloto, ireo ny fitarainana voaray matetika teny an-toerana ary misy fiantraikany amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina izany saingy tsy misy ny vahaolana maharitra. Miezaka ny mametraka fitarainana ny ankabeazan’ny mponina , indrindra fa ny teny Ambohidrapeto.
Ho fanairana ny eo anivon’ny jirama anefa dia niezaka nanatanteraka hetsika ny mponina teny an-toerana ny sabotsy 1 desambra kanefa dia voalaza fa nahazo fandrahonana ny mpitarika, hany ka tsy tanteraka indray ny hetaheta saika hangatahana. Raha tsiahivina kely dia efa nisy hetsika nataon’izy ireo ny 17 novambra lasa teo saingy mbola tsy nahitam-bokany. Izany no nahatonga azy ireo saika hanamafy ny fihetsiketsehana kanefa dia efa mahazo fandrahonana sahady. Mahatsiaro iharan’ny tsindry hazolena no sady miaina ao anaty fijaliana ireto farany. Raha ny fanampim-panazavan’ ireo mponina hatrany dia tsy hanaiky fotsiny ny fandrarana izy ireo fa miandry vahaolana avy amin’ny tompon’andraikitra hatreto.
Izay vao mody mikoropaka ny ministry ny angovo
Eo anatrehan’ity tranga eny amin’ny Faritra Atsimondrano ity dia mbola tsy re mihitsy hatramin’izay ny ministry ny angovo Rasolo-herison Lantoniaina fa hitady vahaolana mahakasika ny famatsian-drano. Rehefa milaza ny hitroatra anefa ny vahoaka ny faran’ny herinandro lasa teo izay vao namoaka fanambaràna ny tenany fa “hanatsara sy hitady vahaolana momba izany ato ho ato”. Miandry izany fatratra hatreto ny mponin’Itaosy.